नेपाली सेनामा भर्ना खुल्यो, सशस्त्र प्रहरीमा सूचना निकाल्ने यस्तो छ तयारी – Online Nepal Site
दशै हाम्रा लागि श’त्रु बनेर आयो सारा खुशी लु’टेर गयो ! गोविन्दको परिवार (हेर्नुहोस भिडियो)
चाउमिन खाँदा एकै परिवारका ९ जनाको मृ ’ त्यु, नमिठो मानेर नखाएका ३ जना बचे
मुख्य पृष्ठ /News/नेपाली सेनामा भर्ना खुल्यो, सशस्त्र प्रहरीमा सूचना निकाल्ने यस्तो छ तयारी
नेपाली सेनामा भर्ना खुल्यो, सशस्त्र प्रहरीमा सूचना निकाल्ने यस्तो छ तयारी
काठमाण्डौं । कोरोना महामारीका कारण रोकिएका सुरक्षा निकायका रिक्त पदहरुमा धमाधम भर्ना प्रक्रियाहरु शुरु भएका छन् । नेपाली सेनाको भर्ना छनौट निर्देशनालय, कार्यरथी विभागले कोरोना भाइरसका कारण रोकिएको भर्ना प्रक्रिया पुनः सुचारु गरिएको जनाएको छ ।
निर्देशनालयले गत माघमा विभिन्न पदहरुमा खुलाएको विज्ञापन कोरोनाका कारण चैत ६ गते स्थगित गर्ने निर्णय गरेकोमा मंगलबार एक सूचना प्रकाशित गरेर पुनः सुचारु गरिएको जानकारी दिएको हो । यस्तै भर्ना छनौट सम्बन्धी विस्तृत जानकारी सेनाको वेबसाइटका साथै सेनाकै मोबाइल एप्स ‘नेपाली आर्मी’ मा हेर्न सकिने छ ।
सेनाले थप जानकारी लिनु परेमा भर्ना छनौट निर्देशनालय, कार्यरथी विभागको सम्पर्क नम्बर ४२४६९५० वा मोबाइल नम्बर ९८६३०३१५६१ मा सम्पर्क गर्न समेत सूचित गरेको छ ।** यो समाचार पुरा हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
यसअघि नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलमा रोकिएको भर्ना प्रक्रिया शुरु गर्न सरकारले निर्देशन दिएको थियो । सरकारको निर्देशनपछि प्रहरीमा जवानको अन्तरवार्ता धमाधम चलिरहेको छ भने सशस्त्र प्रहरीले भर्नाका लागि सूचना निकाल्ने तयारी गरेको जनाएको छ । समाचार साभार
सरकार ढाल्न अर्बौ रकम बोकेर आएका भारतिय एजेण्टसँग प्रचण्ड र माधब पक्षको उठबस ! [भिडियोसहित]
काठमाडौँको न्युरोड बाट आयो ठुलो खुसीको खबर , भोलि बाट यस्तो नियम लागु हुदै !
लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गरिँदै, के गर्न पाइन्छ, के गर्न पाइँदैन?
छ चरणमा यसरी खुल्दैछ लकडाउन, १ साउनबाट विद्यालय देखि निर्माण कार्य सञ्चालन
बिचरा ! रुकुमको घटनामा कसले गर्यो यस्तो षड्यन्त्र ? कल रेकर्ड बारे आक्रोशित हुदै यी आमाको कडा जबाफ (भिडियो सहित)